Shirkadaha wax iibsiga ugu dahsoon ee Uk | 2022 - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn Shirkadaha Dukaamaysiga Qarsoodiga ee ugu Fiican Uk | 2022
Shirkadaha Dukaamaysiga Qarsoodiga ee ugu Fiican Uk | 2022
Inaad noqoto dukaameeye qarsoon waa fursad waqti-dhiman ah oo aad u dabacsan ardayda si ay u sameeyaan xoogaa lacago dheeraad ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah in lagu siin doono lacag waqtigeedii ah, aad dooratid saacadaha shaqada, oo aad hadiyado lacag la'aan ah ku heli doontid habka.
Shirkado aad u tiro badan ayaa diiwaangeliyay baahidooda kuwa wax iibsada ee qarsoodiga ah. Taas macneheedu waxa weeye shaqo badan baa haysa. Gudaha Boqortooyada Midowday oo keliya, waxaa ka diiwaangashan ilaa 500,000 oo dukaameystayaal qarsoon, sidaa darteed tartan shaqo ayaa sii kordhaya maalin kasta.
Waxaan baarnay shirkadaha wax iibsiga qarsoodiga ah ee ugu fiican waxaanan diyaarinnay tilmaamahan dhammaystiran si aan kuu siino dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay.
Akhri tusaheena halkan si aad u aragto shirkadaha wax iibsiga qarsoodiga ee ugu fiican UK oo arag sida loo bilaabo!
Dhanka kale, ka eeg shaxda tusmada halkan hoose si aad u aragto guud ahaan waxa aad ku arki doonto maqaalkan.
Shirkadaha Dukaameysiga Ugu Qarsoon ee Uk
U Adeeg Sharciga
Hubinta Adeegga Caalamiga ah
GWB Dukaameysiga Dahsoon
Waa maxay dukaamaysiga qarsoodiga ah?
Dukaamaysiga qarsoodiga ah waa lacag la beddeli karo jimicsi ku lug leh booqashada shirkado aan la aqoon, makhaayado, suuqyo waaweyn, iyo minimaryada si loo xaqiijiyo in la buuxiyey shuruudo gaar ah (sida nadaafadda iyo adeegga macmiilka oo wanaagsan).
Waa kuma Dukaan Dahsoon?
Dukaameystayaasha dahsoon waa kuwa maalin walba wax iibsada. Waa dad dabiici ah oo aniga iyo adiga ah waxa kaliya ee farqiga samaynayaa waa in ay is -qariyaan. Waxay u yimaadaan sidii dukaanle caadi ah laakiin macno ahaan, waxay yihiin wakiilo qarsoon oo loo diray inay hubiyaan waxyaabaha la xiriira dukaanka.
Waa kuwan qaar ka mid ah waxa dukaameystayaasha qarsoodiga ah ay rabaan inay hubiyaan;
Adeegga macaamilka ee fiican
Tayada cuntada la bixiyo inta lagu jiro booqashada makhaayadda
Nabadgelyada nafta iyo hantida
Dukaan qarsoon muxuu sameeyaa?
Dukaameeyaha qarsoodiga ah ayaa laga yaabaa inuu sameeyo waxyaabo badan oo kala duwan. Caadi ahaan, waxaa looga baahan yahay inay tagaan dhowr meelood oo kala duwan si ay u hubiyaan alaabta.
Marka, meeqa meelood ayaa lagaa codsan doonaa inaad booqato haddii aad tahay dukaanle qarsoodi ah? Tusaalooyinka qaarkood waxay noqon karaan:
Tag maqaayad casho: Shirkadda dukaamaysiga qarsoodiga ah ee aad u shaqaynayso waxay kuu yeelan doontaa hawlo kala duwan. Tan waxaa ka mid noqon kara in laguu diro makhaayadaha si aad u hesho qado ama casho iyo sidoo kale hubi waxyaabaha. Waxay kuu sheegi doonaan inta lacag ah ee lagaa rabo inaad halkaas ku bixisid.
Ku dukaamee dukaan gaar ah: Sida dukaamaysiga qarsoodiga ah ee makhaayadda, nidaamku wuxuu kuu sheegi doonaa waxa iyo waxa aad iibsanayso iyo inta ay ku siin doonaan. Ujeeddada ugu weyn ee halkan waa in la arko sida ay wax u yihiin dukaanka.
safarka: Shirkadaha socdaalka oo ay ku jiraan shirkadaha diyaaraduhu waxay kaloo adeegsadaan dukaanleyda qarsoodiga ah si ay gacan uga geystaan ​​daawashada dhabarkooda.
Hay'adaha ku saleysan adeegga: Waxaa laga yaabaa in lagu waydiiyo qaar ka mid ah xafiisyada adeegga ku salaysan sida bangiyada, shirkadaha, iyo xafiisyada kale ee dawladda si aad wax uga weydiiso badeecado gaar ah ama aad u qaadato imtixaanka aragga.
Waxaa muhiim ah in aad ogaato in lagaa doonayo in aad qorto warbixin ku saabsan wixii aad aragtay ka dib marka aad dhammaysato booqasho kasta. Qaar ka mid ah warbixinnada ayaa u baahan doona inay calaamadiyaan sanduuqyada halka qaarna kaa dooni doonaan inaad qorto fikradahaaga.
Mararka qaarkood, waxaa lagaa rabaa inaad sawirro ka qaadato qaybaha booqashada qaarkood. Calaamadaha ayaa sida caadiga ah doonaya in dhammaan bakhaarradu u hoggaansamaan heerarkooda, sawirkuna wuxuu u sheegi karaa xarunta astaanta in dukaanku u hoggaansan yahay heerarkan.
XIDHIIDHKA: Sida loo sameeyo $ 500 dheeraad ah bishii: 15 Siyaabood oo lagu sameeyo Lacag caddaan ah
Caadi ahaan, nidaamka aad u shaqaynayso ayaa si sax ah kuu sheegi doona sawirka aad rabto inaad qabato, markaa ma aha mala awaal!
Sideen U Noqdaa Dukaan Dahsoon?
Ma rabtaa inaad si dhaqso ah u noqoto dukaanle qarsoon? Waxa aad ka heli doonto halkan waa hage kaa caawin doona inaad si dhaqso ah u dukaameysato. Waxa xiisaha lihi, inay ahaan jireen dhawr shirkadood oo qarsoodi ah oo wax laga iibsado UK waqtiyadii hore, laakiin hadda waxaa jira shirkado badan oo laga dooran karo.
Si aad u noqotid dukaan qarsoodi ah, waxaad u baahan doontaa inaad dhammaystirto hawsha arjiga oo laguu oggolaado sidii dukaan qarsoon oo ah shirkad wax iibsanaysa oo qarsoodi ah. Halkan hoose waa qaar ka mid ah shuruudaha.
Waa Maxay Shuruudaha lagu Noqdo Dukaan Dahsoon?
Uma baahnid shahaado rasmi ah ama nooc tababar ah si aad u noqotid dukaan qarsoon.
Asal ahaan, waxa aad u baahan tahay waa wakhti firaaqo ah oo aad u baahan doonto si aad u bilaawdo xiisahaaga qarsoodiga ah ee iibsiga. Waxa kale oo aad u baahan doontaa kamarad ama taleefanka gacanta si aad sawirro uga qaadato goobaha
Shirkadaha qaarkood waxay kaa rabaan inaad buuxiso nooc ka mid ah imtixaanka qoraalka ah. Tani waa si loo hubiyo inaad si sax ah ugu qori kartid warbixinta ugu dambaysa ee macaamiishooda. Baadhitaanadani ma aha kuwo adag, inkasta oo ay wakhti hore qaadan doonaan.
Ma Heli Karaa Lacag Anigoo ah Dukaan Dahsoon?
Haa! Markaad bilowdo inaad u shaqayso sidii dukaan qarsoodi ah xoogaa lacag fiican ah shaqada ka baxsan. Inta aad kasban doonto waxay si weyn ugu xirnaan doontaa heerka khibradaada iyo shirkadda aad u shaqayso. kani waa dukaanle qarsoodi ah laakiin habka aad wax u bixinayso way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran shaqada iyo shirkadda.
Intee In le'eg Ayuu Dukaameyste Dukaameeyaha Ahaa?
Dukaamaysiga dahsoon waa shaqo waqti-dhiman ah iyo hab aad u jajaban oo lacag caddaan ah oo dheeraad ah lagu sameeyo. Waxa kale oo fiican inaad fahanto lacagta aad samayn doonto ma noqon doonto mid aad u badan. Celcelis ahaan, waxaad samayn kartaa inta u dhaxaysa £ 50 illaa £ 100 bishii.
Waxa xiisaha lihi, qaar ka mid ah dukaameystayaasha qarsoodiga ah ee waqti-buuxa ah ayaa soo sheegay inay kasbadaan inta u dhaxaysa £ 30-40,000 sanadkii, laakiin tani waa ka dib markay sannado badan ku qaadatay shaqada oo ay sumcad ku yeelatay warshadaha.
Maxay yihiin Shirkadaha Dukaamaysiga Qarsoodiga ee ugu Fiican UK?
Waxaa jira shirkado aad u badan oo qarsoodi ah oo wax iibsi oo aad ka heli karto UK laakiin waxaan soo bandhigi doonaa tobanka ugu fiican ururintaan.
Si naxariis leh u fiiri liistada hoose si aad u aragto oo aad u codsato mid kasta oo ka mid ah shirkadaha ku danaynaya.
Liiska Shirkadaha Dukaameysiga Qarsoodiga ee ugu Fiican Ingiriiska
Ipsos waa mid ka mid ah shirkadaha wax iibsiga qarsoodiga ah ee ugu fiican UK iyo adduunkaba. Waxaa jira shaqooyin fara badan oo ku saabsan nidaamka Dukaameysiga Qarsoon ee Ipsos oo daboolaya UK oo dhan.
Hal dhinac ayaa ah habka warbixinta ee Ipsos waxay noqon kartaa mid waqti badan qaadata maadaama lagaa filayo inaad ku shaqayso lacag caddaan ah, laakiin haddana waxay si deeqsinimo leh u bixiyaan!
Waxaad ku biiri kartaa kooxdooda adiga oo codsanaya adigoo adeegsanaya xiriiriyaha hoose.
Ku biir Ipsos
#2. Ciidanka Suuqa
Marketforce waa haybad caalami ah oo ku dhex jirta warshadaha dukaameysiga qarsoodiga ah. Nidaamka diiwaangelintu waa lacag la'aan.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Bilaabo Meherad ku taal Missouri 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Dukaameeyaha qarsoodiga ah ee Suuqa Xoolaha, waxaad abaalmarin ku heli doontaa iibsashada iyo dukaamaysiga bilaashka ah.
Marketforce waxay leedahay barnaamij moobayl oo aad ku soo dejisan karto lacag la’aan, taas oo macnaheedu yahay inaad wax ka iibsan karto ka dibna ku dhex tartami karto barnaamijka, ha ahaato sawir qaadis, dhammaystirka warbixinta ganacsiga, ama gelitaanka kharashyada.
Sidoo kale, shirkadu waxay siisaa lacago kaash ah shaqooyin badan oo ay qabtaan, laakiin mararka qaarkood, (badanaa makhaayadaha aad fadhiisato oo aad wax ka cuntid) waxay kaa magdhabi doonaan cuntadaada halkii aad bixin lahayd lacag caddaan ah.
Marketforce waa shirkad muddo dheer soo jirtay oo leh fursado ganacsi oo tiro badan. Ka dhig meesha ugu horreysa ee wax laga iibsado qarsoodiga ah!
Ku biir Ciidanka Suuqa
In kasta oo RedWigWam uusan u weyneyn sida Marketforce, haddana waxay caan ku tahay Boqortooyada Midowday inay u shaqeyso sidii dukaanleyda qarsoodiga ah. Waxay leeyihiin xulashooyin kala duwan oo wanaagsan.
Waxay u muuqdaan inay haystaan ​​shaqooyin badan oo dukaamada waaweyn ah, taas oo ka dhigaysa mid aad u fiican inay la jaanqaado safarkaaga dukaamaysiga ee caadiga ah…
RedWigWam waxay qaadataa inta u dhexeysa 15 daqiiqo illaa saacad, markaa u fiirso waqtiga aad bannaanka joogto oo aad ku dhowdahay waxaana laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho xoogaa lacag qabow ama foojarro ka hor intaadan guriga ku noqon.
Ku biir RedWigWam
#4. U Adeeg Sharciga
Serve Legal waa shirkad wax iibsi oo qarsoodi ah oo nooc ka yara duwan. Shirkaddu waxay shaqaalaysiisaa dadka da'doodu u dhaxayso 18 iyo 19 waxa loogu yeero "adeegyada tijaabada da'da la xiriira".
Tani waxay si fudud uga dhigan tahay haddii shirkadu iibiso alaabada da'da xaddidan (sida cabbitaannada aalkolada ah), dukaanleydan qarsoodiga ah waxay hubin doonaan inay u baahan yihiin aqoonsi si loo hubiyo inaysan jirin iib yar.
Adigoo ah hogaamiyaha suuqa ee shaqadan, Serve Legal wuxuu u diraa dukaameystayaasha qarsoodiga ah 14,000 meelood bil kasta, taas oo macnaheedu yahay inay jiraan shaqo badan oo la qabto!
Qaybta ugu fiican? Waxaan ku siin doonaa si uun! Waxaa jira lacag caddaan ah oo lagu shubo shaqo kasta (illaa £ 45), laakiin wax badan ayaad ka bixinaysaa cabbitaanka. Waxa kale oo aad helaysaa lacagtaada dhammaan kharashyada safarka. Shaqo ahaan 18-19-jirka, tani waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu helo guri bilaash ah!
Ku biir U Adeeg Sharciga
Eeg 50 Fikradaha Ganacsi Yaryar ee Ugu Fiican Oo Aad Hadda Bilaabi Karto
Grassroots waxay siisaa adeegyo qarsoon oo aan qarsoonayn dhammaan meelaha caanka ah ee aad ka filan karto… dukaamada iyo maqaayadaha jidadka sare iwm. Waxay kaloo adeegyo siiyaan hudheelada iyo goobaha madaddaalada!
Sidaad filan karto, shaqooyinka si dhakhso ah ayaa loo dhammaystiri doonaa muddo dheer lama heli karo, markaa waxaad u baahan tahay inaad hubiso haddii shaqooyinka si joogto ah loogu daro goobta.
Si aad iyaga ugu biirto, waa inaad mar walba booqataa goobtan hoose. Waxay qaadan doontaa wakhti, laakiin sii wad inaad hubiso. Haddii aad nasiib leedahay, waxay noqon doontaa yaab weyn!
Ku biir Grassroot
Assosia waa shirkad ka yar shirkadaha kale ee Dukaamaysiga Qarsoodiga ah, laakiin ganacsigoodu inta badan xoogaa wuu ka duwan yahay shirkadaha kale.
Marka la diiwaangeliyo oo la aqbalo, Waxaa lagula soo xiriiri doonaa marka shaqo ka soo muuqato aaggaaga oo laguu digo, taas oo aan had iyo jeer sidaas ahayn.
Shirkaddu waxay u badan tahay inay gasho shaqooyin xirfadeed oo badan. Waxaa laga yaabaa in shirkad gaar ah ay rabto inay dhammaystirto shaqo ku meel gaar ah ama raadiso shaqo gaar ah, waxaa lagu siin doonaa tababar hawshaas si aad u fuliso.
XIDHIIDHKA: Sida lacag looga helo Robocalls sanadka 2022
Mushaharkoodu wuu fiican yahay. Shaqo kasta waxay ku kacaysaa qiyaastii £ 10.
Ku biir Assosia
gaar ah: Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda Amazon ee Lacag La'aanta ah: 24 Xeelado Lagu Helo Ilaa $ 100 Off
#7. Hubinta Adeegga Caalamiga ah
ISC waxay inta badan la shaqaysaa magacyada moodada. Markaa haddii aad mooddo mood, tani waxay noqon kartaa ganacsi dhinac xiiso leh leh. Shaqo kasta waxaa loo qoondeeyay qof ay shirkadu u malaynayso inuu ku habboon yahay inuu qabto shaqada. Waxaa laguu sheegi doonaa waxa la sameeyo, mushaharka aad heli doonto (ama iibsiga iibsiga), ka dibna waxaad go'aansan kartaa inaad aqbasho shaqadaas iyo in kale.
Ku biir ISC
Clickworker waa shirkad microtasking oo si fiican loo aasaasay oo dhowaan ku fidday boqortooyadii wax iibiyaha qarsoodiga ahayd. Shaqooyinka badankood waxaa ka mid ah tagista dukaan ku yaal agagaarkaaga iyo sawiridda alaabta alaabta.
Qeybta ugu fiican ayaa ah inaad ka dooran karto dukaan kasta silsiladaha lagu siiyay. Kuuma kaa dhigayaan inaad aado cinwaanno gaar ah si aad u hesho doorashooyin badan oo lacag la'aan ah. Safar gaaban oo lagu tago waddada sare ama beerta tafaariiqda ee kuugu dhow ayaa ah waxa inta badan loo baahan yahay.
Waxa taas ka sii fiican ayaa ah inaanu jirin wax iibsi ah oo lagama maarmaan u ah shaqooyinkan. Clickworker wuxuu si joogto ah u siiyaa shaqooyin sawir -qaadis qarsoodi ah inta badan waddamada Yurub, Bariga Dhexe iyo Mareykanka.
Payment: Caadi ahaan qiyaastii € 8 - € 12 oo lagu daray gunno kale
Ku biir Clickworker
Tern waxay bixisaa ganacsi wax iibsi oo qarsoodi ah. Waxay hubiyaan adeegga macmiilka shirkadda waxayna diiwaangeliyaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan booqashada. Waxay bixiyaan shaqooyin aad u yar, waxayna ku siin doonaan waqtigii loogu talagalay toddobaad kasta.
Tern waxay kaloo bixisaa shaqo aad ku samayn karto labadaba onlaynka iyo taleefankaba, si aad u dhammaystirto shaqada oo aad xoogaa dakhli ku hesho adiga oo aan guriga ka tagin!
Ku biir Tern
#10. GWB qarsoodiga wax iibsiga
GAPbuster wuxuu dhowaan isu beddelay GBW. Qofna ma garanayo sababta weli. McDonald's waa macmiilkooda ugu weyn sidaa darteed shirkadan waa doorasho weyn haddii aad jeceshahay qaar ka mid ah Cuntooyinka Farxada leh ee bilaashka ah!
Waxaa lagu wargeliyay inay u diraan meeleyn ku celcelin ah isla goobtii si ay ula socdaan hagaajinta. Markaa tani ma noqon karto doorashada ugu fiican haddii aad raadinayso noocyo kala duwan.
Payment: Inta u dhaxaysa £ 5-35 shaqo kasta
Iibsiga qarsoodiga ah ee GWB micnaheedu waa inaad:
Iska diiwaangeli boggooda internetka
Gal bogga xariirka
Dhammeystir cutubyada hanuuninta iyo tababarka
Raadi oo dooro hawlaha
Soo dejiso, daabac oo akhri tilmaamaha
Booqashada iyo qiimeynta dhoofinta
Ku soo gudbi natiijooyinka 8 saacadood gudahood
Ku soo rar rasiidka 8 saacadood gudahood
Shaqo kastaa waxay qaadataa ilaa 15 daqiiqo, waxaadna filan kartaa in lagu siiyo 4 ilaa 6 toddobaad gudahood markay shaqadu dhammaato, markaa waxaad u baahan tahay inaad sugto xoogaa ka hor intaadan arkin lacagta caddaanka ah!
Ku biir GBW
Sida Loo Bilaabo Meherad ku taal Missouri 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Amaah Ganacsi Aan La Hubin Ee Ugu Fiican 2022
30 Barnaamijyo Dakhli oo Dadban si Lacag Loogu Sameeyo Intaad Joogto | 2022
Meijer Money Order 2022 Sida ay u shaqeyso | Talooyin | Kharashyada
Qaar badan oo u ooman inay helaan Meijer Money Order laakiin aan wax aqoon ah u lahayn ama aan wax aqoon ah u lahayn…
Sideen lacag ku heli karaa haddii aanan waxba qaban 2022? Shabakadaha, Barnaamijyada & Siyaabaha
Mowduucan ma kuu muuqdaa mid yaab leh? Sida wax lagu qoslo oo aan macquul ahayn sida ay u ekaan karto, dhab ahaantii waad…
9 Siyaabood oo Cusub oo Lacag Badan Loogu Iibiyo Kartoonka Ink La Adeegsaday | 2022 Liiska
Waxaad haysataa daabacaha guriga (ama shaqada) oo isticmaalaya khad aad u daran. Waxaa laga yaabaa inaad tahay…